Izindlu ezivalekile ze-Weatherproof Stand-Alone Digital Access Control Metal Keypad Zethulwe-News-Yuyao Xianglong Communication Industrial Co, Ltd.
Ikhiphedi ye-Metal yekhiphedi ye-seft eyenziwe nge-selocated Alter Digital Access
Isikhathi: 2020-08-06 Hits: 29
I-OEM Evalisiwe Yezindlu Yokungena Kokulawula Ukungena Kwensimbi yekhiphedi
I-4x4 16keys zinc alloy ikhiphedi ekhanyisiwe + izindlu ezingenazinsimbi ezingenazinsiza zezulu, futhi usebenzise izikulufo ezikhethekile zokuphazamisa ukuvimbela abanye ukuvula ngokuthanda, ekugcineni kwakhelwe umkhiqizo wokulawula ukufinyelela ongapheli. Iphethini yekhiphedi, umbala we-LED konke kungenziwa ngezifiso.
Uhlelo lokusebenza oluhle lwezinhlelo zokulawula ukufinyelela, izingcingo zomnyango wevidiyo, ama-Intercom, njll.
Ngezansi kunezici ezithile:
Ama-1.Outputs angahlelelwa ukuthi asebenze
Ukufakwa kwe-egressmable egress izinkomba zokuzikhethela
Izici ze-3. Zonke izinto zihlelwe ngokuqondile kusuka kukhiphedi: Asikho isidingo sohlelo lwangaphandle
Isilinganiso se-4.IP66 Weatherproof
5.Afika ebhokisini elijwayelekile emuva leqembu elilodwa (kubekwa ibhokisi elingaphezulu kwe-back box)
I-6.ephat engabonakali yensimbi engenasici
Ukukhishwa kweTamper: Ukuxhumana kwe-NC Dry, 7mA @ 50VDC max.
8.Keypad ikhanyisa lapho inkinobho icindezelwe; ilambu langemuva lingahlelelwa i-FULL, AUTO, noma i-OFF kumodi yokulinda
Kubikwa ukuthi ukuthengiswa kwama-smart lock kulinganiselwa ukuthi kungamayunithi ayizigidi ezimbili e-USA Ukulinganiselwa kokusetshenziswa komhlaba kukhulu kakhulu. Isithiyo ekukhuleni okwengeziwe ukuthi izindleko zokuthengisa ezikhiyekile zinkulu uma kuqhathaniswa nokukhiya okukodwa kokusebenza, okufana ne-video doorbell kuphela. Ngokukhishwa okuhlakaniphile okugcwele okune-IoT, ngesikhathi abantu bengeza imodyuli yevidiyo yomnyango, imojuli ye-WiFi, nemodyuli yekhiphedi ephephile, kungabiza u- $ 2 +. Lokhu kubiza kakhulu ukungena kwabathengi abaningi. Ngakho-ke, bagcina bethenga kuphela ikhamera yevidiyo yekhamera nge $ 500- $ 100. Futhi, ikhasimende kufanele lenze ezinye izintambo zokwenza wonke amamojula asebenze ndawonye. Ngenxa yalokhu, abantu abaningi badinga ukuqasha osebenza ngogesi ukuze afakelwe ubuchwepheshe, ngoba ikhasimende kungenzeka lingabi nekhono ekwenzeni izintambo zikagesi.
Ngakho-ke ukuthuthukisa nokwenza ikhiphedi ibe yinhle futhi kube lula ukufakwa kwamakhasimende kubaluleke kakhulu ngokuzayo. Ukuhlinzeka abasebenzisi ngemikhiqizo ephezulu yobuchwepheshe obekulokhu kuyimpumelelo kaXianglong ngokuthembela ekuthuthukisweni kwesayensi nobuchwepheshe.
Okwedlule: Kungani Amajele Aphindisela Ukuvakasha Ngezingcingo Zevidiyo?
Okulandelayo: I-2 Wooden Box 4x4 Matrix Waterproof Zinc Alloy Keypads Export